निर्वाचनपछि ब्रेक्जिट नीतिमा यू टर्न
हालै सम्पन्न बेलायतको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको सत्ता रुढ कन्जरभेटिभले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि हार्ड ब्रेक्जिटको अडान राख्दै आएकी प्रधानमन्त्री मेले आफ्नो अडान परिवर्तन गरि नरम नीति अपनाउन सक्ने संकेतहरु मिलेका छन् ।
लण्डनको वीलवीचमा नेपाली डाक्टरहरूले निशुल्क चिकित्सा शिविर संचालन गर्दै 12 hours ago
लण्डन । बेलायती नेपाली डाक्टरहरूद्वारा लण्डनको विलविच स्थित टाउनहलमा अहिलेसम्मकै नेपालीहरूद्वारा सम्पन्न गरेका चिकित्सा शिविरहरूभन्दा फरक तथा बृहत चिकित्सा शिविर संचालन हुने भएको छ ।
युवाहरुको नजरमा ‘नेपाली ऐश्वर्या राय’ (केही तस्वीर)
काठमाडौं, असार ९ । विश्वमा ७ जनाको अनुहार उस्तै मिलछ भन्ने आम मान्यता छ । तपाईँको अनुहार पनि सायद कसैसँग मिल्दोजुल्दो होला । तर कुनै विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिसँग तपाईँको अनुहार मिल्छ भने पक्कै आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुहुनेछ ।
यी तस्बिरहरुले आज पनि जबाफ मागिरहेका छन्
एजेन्सी–गएकाे वर्ष टर्कीस्थित सामुन्द्रिक तटमा एक बच्चाको लाश भेटियो । घोप्टी परेको अवस्थामा फेला परेको उक्त लास सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल भयो । सिरियामा रहेको आतंवादी संगठन आइएसलाई
टाइगर श्राफले कसलाई दिए मर्सिडिज कार गिफ्ट ?
मुम्बई । बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफले हालसालै निर्देशक शब्बिर खानलाई चकित बनाइदिएका छन् ।
बनेपा, असार ९ । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाको एउटा रुखमा फलेको बोधिचित्त फलको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन ।
दाेस्राे चरणकाे चुनावमा गठबन्धनका जसले जिते पनि कांग्रेसमै गणना हुने
काठमाडौं, असार ९ । पहिलो चरणको चुनावमा प्रतिपक्षी एमाले विरुद्ध कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि अधिकांश ठाउँमा पराजित भएपछि यसपटक जिल्लागत रुपमै कांग्रेस–माओवादीले बहुपार्टी गठबन्धन गरेका छन् ।
कसरी बने यी व्यक्ति ८०० बच्चाका पिता ?
एजेन्सी–एक मानिसको ८०० बच्चा कसरी हुनसक्छ ? हरेक हप्ता कसरी कसरी पिता बन्न सक्छ ? यो कुरा सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला ? कुरा यस्तो रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका उम्मेरदवार एक सातादेखि बेपत्ता
इलाम, असार ९ । इलाम नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार नारायण राई बेपत्ता भएको एकसाता बिते पनि उनको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
विराटनगर कांग्रेसको पेवा होइनः मेयरका एमाले उम्मेदवार ढकाल
विराटनगर , ९ असार । नेकपा एमालेका उम्मेदवार विनोद ढकालले नेपाली कांग्रेसले विराटनगरलाई कामतका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।